Barri haaraa fi Guyyaan Waraana Bilisummaa Oromoo haala hoo’aan kabajame; WBO jabeessuufis maaallaqni gumaachame!
Date: January 8, 2013Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, Melbourne, 08 Amajjii 2013) Guyyaan waraana Bilisummaa Oromoo, Amajjiin tokko, sirna hoo’aadhaan magaalaa Mebourne keessatti kabajame.
Madda Oduu ABO/MOA/ wabeeffachuun Oromedian akka gabaasetti, ayyaana guyyaa WBO kana irratti sochiilee ABO fi haleellaa WBO bara 2012 keessa taasise ilaalchisee ibsa bal’aan ummataaf kenname keessatti WBOn humna ittisaa ABO fi ummata Oromoo ta’uun baroottan darban keessa halleellaa diinaa ofirraa ittisaa, humna qubattuu alagaa ummata Oromoo irratti roorristuuf barumsa malchiisu kennaa akak jiru hubatamee jira.
Keessattuu, haleellaa diidaa itti fufiinsaan WBO irratti akraa hedduu banamaa dhufe ofirraa ittisaa, WBOn haala hedduu dinqisiisaa ta’e keessatti gaachanummaa isaa ummata Oromoof mirkaneessaa akka jiru ibsa kenname irraa hubachuun danda’amee jira.
“Umamti Oromoo yeroo alaagaan reebamaa fi hiraarfamaa jirutti, humni tokkichi ummatichaaf ittisa godhu WBO ta’uu kan hubate diinnis humna qabuu fi hin qabne maraan WBO marfata keessa galchuu, laamshessuu fi dhaabamsiissuuf yaalii hedduu gochaa ture; amma illee itti jira,” kan jedhan Miseensi Gumii Sabaa ABO fi Gaafatamaan Birkii Beeksisii fi Odeessii Alaa, J/Gaashuu Lammeessaa, WBOn garuu duula olaanaa itti banamaa jiru ofirraa deebisuu bira darbee kanneen akeekkachiisaa fi hubachiisa kennameef dhagayuu didan maraaf barumsa malchiisaa kennuutti jira,” jedhan.
Hawaasti ayyaana guyyaa WBO kana kabajuuf argamanis sochii ABO fi WBO irratti ibsa kenname erga dhaggeeffatanii booda, WBO daran jabeessuuf gumaacha maallaqaa arjoomanii jiran.
Kabaja ayyaana kanaan durattis kora hawaasaa taasifame irratti hawaasaaf ibsi bal’aa haala qabsoon bilisummaa Oromoo, mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo fi haala addunyaa ilaalchisee ibsi kennamee jira.
Keessayyuu, mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti araaraa fi nagaa buusuuf yaalii godhameen walhubannoo ABO fi Qaama Ce’umsaa gidduutti irra gahame ilaalchisuun Jaal Dhugaasaa Bakakkoo ibsa karaa bilbilaa hawaasaaf kennaniin walhubannoon irra gahame waldhabdee dhalatee yeroo dheeraaf otuu hin furamiin ture, hiikkachuun caalattis, ABO jabeessuu fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ittichuu keessatti qooda olaanaa akka qabu ibsanii jiran.
Haalli gaddisiisaa akkasii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti uumamuun hedduu qaaanessaa ta’uu kan eeran J/Dhugaasaan, “haa tauru iyyuu malee, waldhabdee san otuu qaamni sadaffaa gidduu hin seeniin hiikkakchuun jabinaa fi kutannoo kaayyoo Oromoo galmaan gahuuf qabnu mirkaneessa,” jedhan.
Ayyaana guyyaa WBO kabajame kana irratti, kana malees, WBOn humnaa fi irree ummata Oromoo ta’uu kan ibsuu fi gootummaa WBO kan dhaadhessu walaloon dhiyaates hawaasaan jaalatamee jira.
Akkasumas, artistoonni Oromoo hawwisoo warraaqsaa fi ammayyaatiin hawaasa sagantaa kabajannaa guyyaa WBO fi bara haarawaa kana irratti argaman booharsanii jiru.
Seenaa WBO irraa akka hubatamutti, WBOn baroota 1970moota gara dhumaa keessa marfata diinaa olaanaa keessaa aarsaa olaanaatiin cabsee bahuun, dhabama jalaa of-baasee guyyaa walitti deebi’ee walijaare sababeeffachuun bara 1980 irraa kaasee bara baraan Amajjin tokko: guyyaa WBO- ta’uun kabajamaa jira.
WBO bara 1976 irraa eegalee Adda Bilisummaa Oromoo jalatti damee waraana Bilisummaa Oromoo ta’uun gurmeeffamee dirqama hidhannoon qabsoo Oromoo fi ummata Oromoof ittisa ta’uu irratti bobba’ee akka jiru beekamaa dha.
Previous Previous post: Korri Gamtaa Miseensota ABO Australia fi New Zealand milkiin xumurame; qabsoo Oromoo daran jabeessuuf murteeffatan
Next Next post: Qeerroon Oromoo Afrikaa Kibbaa Oromoo Boonse!